IPhone bixin karo telefoonka wax kale smart xiiso iyo madadaalo ka badan. Laakiin nolosha batari telefoonka ee waa wax dadka isticmaala xaqiiqadii aan ku faraxsanayn. Halkan waxaa ku qoran soddon Talooyin in ay hagaajin kartaa noloshaada batari iPhone ee.
1. Ku rakib updates macruufka sida ugu dhakhsaha badan ay lagu sii daayo
Apple oo soo bandhigtay tamarta updates badbaadiya, oo si wayn ay u horumarin karaan noloshaada batteriga. Sidaas, hubi in aad iPhone uu leeyahay oo dhan updates ay shaacisay Apple.
2. Change goobaha xogta marka laga daadiyo aan la isticmaalayn
Shaki kuma jiro in 3G iyo 4G LTE bixisaa xawaare internet weyn. Laakiin mataanuhu aad dukaamada la network-xawaaraha sare ee sidoo kale gororinaysa aad batteriga si deg deg ah. Sidaas, dami network-xawaaraha sare ee data (LTE) haddii heerka batari waa mid aad u yar, ama xitaa marka aan isticmaalayo barnaamijyadooda aad.
3. Mar mar istaag auto-koombiyuutarka ee sawiro iyo videos in iCloud
Riix goobaha, ka dibna tag photos & camera, iyo demi auto-Uploads. Habkaani ma aha oo kaliya gubtay, xogta internet, laakiin sidoo kale gororinaysa iPhone ee batari si deg deg ah.
4. Hayso Bluetooth marka aan la isticmaalayn
Dadka isticmaala iPhone door bidaan in ay ku xidhmaan ay telefoonka kula hadla dibadda, dhego gashi wireless, xadhigga isboortiga, oo xataa wuxuu Apple daawado via Bluetooth. Kuwanu waxay kulligood qalabka dibadda waa weyn, laakiin waxaa laga yaabaa in si deg deg ah ay sabab u tahay isticmaalka Bluetooth daadi aad batteriga. Sidaas, waxaa lagu talinayaa in aan in ay isticmaalaan qalabka, kuwaas oo markii batari aad telefoonka ee waa yar yahay.
5. Ka dhig ugu horeeya ee shakhsiga ah marka aan la isticmaalayn
Habkaani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u wadaagaan xiriir internet aad la qalab kale. Waxaa lagu talinayaa in ay soo jeedin goobtan goobta ay off isla markiiba ka dib marka aad dhammaysid isticmaalaya. Xitaa habkaani gororinaysa batari si deg deg ah.
6. Hubi qaybta isticmaalka batari si aad u hesho barnaamijyadooda dilaaga batari
Apple soo bandhigay habkaani in ay update macruufka 9. Qaybta isticmaalka batari waxay muujinaysaa batteriga sare cunaysa Chine oo ay la socoto sababta isticmaalka ay awood sare ka dambeeya. Dhammaan wixii aad u baahan tahay inaad samayso waa eeg liiska iyo demi codsiyada ka walaacsan.
7. Hubi in adeegyada goobta waa la damiyay markii aan la isticmaalayn
IPhone caashaqi jiray mahad adeegyada goobta kasoo muuqdo sida ay raad telefoonka iyo ku siinaysaa talooyin ku saabsan meelaha u dhow. Laakiin mar kale, waxa gororinaysa batari si dhakhso ah. Sidaas, dami habkaani marka aan la isticmaalayn.
8. Ka fogow isticmaalidda soo jeeda firfircoon
Tani waxay u muuqan yaabaa in cajiib ah, laakiin asal ahaan firfircoon ama wallpapers kartoon ah baabba 'badan oo ka mid ah batariga. Sidaas, haddii aad rabto in la hagaajiyo nolosha batari aad telefoonka ee, waxaa lagu talinayaa in ay iska ilaaliyaan isticmaalka wallpapers ama mawduuc sida.
9. hab auto-dhalaalka off
IPhone ee shidma light waa mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee qalab ee; waxay habaysaa dhalaalka screen ee sida nuurka ku wareegsan. Laakiin habkaani cunaa aad batteriga, sida screen buuxiyo ifaya halka meelo gudcur ah. Sidaas, waxaa lagu talinayaa in dami habkaani kor u qaadaysaa awooda batariga ee.
10. Iska ilaali in aad ku tiriska iPhone in heerkulka sare
Apple soo jeedinaya isticmaala si aan si ay u isticmaalaan iPhone meelaha heerkulka sare. Hot deegaanka laga yaabaa dhaawici batteriga iyo hoos u sii ay nolosha. Qalabka waxaa loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan dhammaataan ee heerkulka ilaa 35 C kulaylka.
11. baxay kiiska Hayso qalab aad halka ku amraya
Qalabka wuxuu u helo kulul halka ku amraya oo dhalin aad kulayl ka badan, haddii ay weli ku jira kiiska halka amraya. Tani waxay si aan toos ahayn loo yareeyo nolosha batteriga.
Batari 12. Charge aad telefoonka ee ilaa 50 boqolkiiba halka ay calaamaddu waxaa lagu kaydiyo
Haddii aad qorshaynaysid in aadan isticmaalin iPhone dhowr maalmood, waxaa lagu talinayaa in ay ka qaadaan batari ilaa 50 boqolkiiba ee nolosha batari fiican.
13. fiilada aad iPhone halka hoos xiro aad PC
IPhone ee batari daadi karaa, haddii ay la xidhiidho PC ama laptop waa in dab-dhaliyeyaal heegan hab, hab hurdada, ama uu dansan yahay.
14. Ka ilaali feature soo jeeda app helid off
Chine Background u raaxayn feature u ogolaanaya in ay dhaqaalo ka helo xogta codsiyada ay xitaa ma marka la isticmaalo aad. Ilaalinta off habkaani kaa caawin kara inaad hagaajiyo nolosha batteriga.
15. Hayso qalab hab diyaarad halka caymiska hooseeyo
Haddii aad u ogaadaan in aad ku jirto shabakadda yar yahay caymiska zone, waa in aad iska badasho aad iPhone in hab diyaarad si loo badbaadiyo batteriga.
16. Switch in Wi-Fi halka aaga Wi-Fi
Hab Wi-Fi gubtay, batariga ka yar marka la barbar dhigo LTE ama 3G. Sidaas, marka aad aaga Wi-Fi, xidhaysa hab LTE / Data oo shid Wi-Fi.
Auto-update hab 17. sii off for Chine
App dejiyeyaasha Qaar ka sii xariirta wax Chine ay si maalinle ah, iyo qaar ka mid ah updates kuwanu ma xitaa muhiim ah. Sidaas, waxaa wanaagsan in ay xidhi doonto hab update auto u barnaamijyadooda.
18. Dami feature barnaamijyadooda soo jeediyay
Apple soo bandhigay habkaani la macruufka 9. feature Tani waxay soo jeedinaysaa barnaamijyadooda sida ay goobtaada. Waxaa fiican in la noqon habkaani off nolosha batari fiican.
19. xogta riix sii hab off
Xogta ka murugeeysan dib ciyaari aad qaylodhaan mar kasta oo aad hesho email kasta. Habkaani gubtay badan oo batari maadaama ay si joogto ah ku hayaa on laftiisa la xariirta. Sidaas, waa in aad ka fiirsan waxa ka fogaado, iyo email hubi gacanta isticmaalaya barnaamijyadooda.
20. Dami farriimaha aan loo baahnayn
Hubi xarunta wargelinta iyo sii farriimaha loo baahnayn off ah si loo badbaadiyo u xoogga batteriga.
21. barbaraha waa in lagu demiyo
Ciyaaryahanka Tani feature music sidoo kale qayb badan oo xoog leh batari haddii hayaa.
22. Ka ilaali Oo aad indhahaaga ku feature Wi-Fi
Ka dib markii la isticmaalayo Wi-Fi, hubi in aad dami la mid ah. Feature Wi-Fi hayaa batari dheecaan halka iskaanka shabakad Wi-Fi. Sidaas, habkaani waa in lagu demiyo markii aan la isticmaalayn.
23. Set auto qufulka in hal ama laba daqiiqo
Feature Auto-qufulka jirsado aad iPhone in ay seexdaan hab. Waqti ee auto-qufulka sidii hal ama laba daqiiqo. Tani loo yareeyo culayska aad batteriga.
24. tracker taam sii off
Tracker Fitness isticmaalaa dareemayaal si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa jimicsiga aad iyo aad siiyaan macluumaadka ee la mid ah. Habkaani waa in la damiso marka aadan jimicsi.
25. Ka fogow u jawaabay oo ku baaqay in iyada oo loo marayo qalabka kale
Ka sokow samaacado wireless, waxaa jira qalabka dhowr ah oo loo isticmaali karo in ay ka jawaabaan taleefan. Tani waxay u baahan Wi-Fi ama Bluetooth isku xirnaanta iyo ugu dambeyntii gubtay, awoodda batariga.
26 Ha u dirin info la xiriira qalab si Apple
Riix goobaha, ka dibna u gaarka ah, waxaana ku xiga baadhitaan iyo isticmaalka, iyo dooro ikhtiyaarka "Ha u dirin" si ay u joojiyaan diraya info qalab si Apple. Tani cunaa xogta iyo sidoo kale nolosha batteriga.
Hab 27. gariiriye sidoo kale la cunaa batari
Iska ilaali inaad isticmaashid gariiriye oo ay la socdaan giraan; u isticmaalaan oo kaliya haddii aad iska sii ringer ah.
28. qulqusho aad batteriga mar bil ah
Hoos ilaa 20 keena batari aad telefoonka ee boqolkiiba ka hor inta ku amraya. Taasi waxay hagaajin doontaa nolosha batari aad telefoonka ee.
29. Ka ilaali dhalaalka gaabiyo
Dheellitir aad iPhone ee shaashadda dhalaalka oo ka dhig mid gaabiyo nolosha batari fiican.
30. batari hawlaha degdegga ah Control
Si loo hagaajiyo nolosha batari kale oo aad isku daydo in aad si loo yareeyo ciyaaro, daawashada cajaladaha, daalacanaya internet, iwm
> Resource > iPhone > 30 Tips for Bettery iPhone Battery Life